Sri Lanka vs Zimbabwe 1st ODI 2022 Highlights
Cricket Highlights - Sri Lanka vs Zimbabwe 1st ODI 2022
Watch the highlights of Sri Lanka vs Zimbabwe 1st ODI 2022 - Zimbabwe tour of Sri Lanka 3-match one-day international series of the 1st ODI match played between Zimbabwe and Sri Lanka at Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele in 16th January 2022.
Dinesh Chandimal and Charith Asalanka put up a century partnership © AFP/Getty Images
Seventies from Pathun Nissanka, Dinesh Chandimal and Charith Asalanka guided Sri Lanka convincing five-wicket victory over Zimbabwe, despite a brilliant century from Sean Williams and take a 1-0 lead in a high-scoring game of the first ODI.
Sri Lanka chased 297 was their third highest successful run-chase against Zimbabwe in One-day international and It is their second highest chase at their home venue in ODIs.
Zimbabwe's 296 was their fourth highest score against Sri Lanka in One-day international and It is their third highest total in Sri Lankan soil in ODIs.
Sri Lanka's 300 was their joint fifth highest against Zimbabwe in One-day internationals.
Sean Williams became the ninth Zimbabwe batsman to score a hundred against Sri Lanka in One-day international and fifth Zimbabwe player to score a century in Sri Lankan soil in ODIs.
80 : Takudzwanashe Kaitano and Regis Chakabva set up the seventh highest first-wicket partnership for Zimbabwe against Sri Lanka in One-day internationals.
129 : Dinesh Chandimal and Charith Asalanka set up the second highest fourth-wicket partnership for Sri Lanka against Zimbabwe in One-day internationals.
Zimbabwe scored 296-9 in 50 overs with top scorer by Sean Williams hammered a 100 off 87-balls - which was his 5th ODI hundred & his first century against Sri Lanka in ODIs - including 9-fours & 2-sixes with strike rate of 114.94.
Regis Chakabva cracked a 72 off 81-balls including 6-fours & a six, Debutant Takudzwanashe Kaitano - who scored 42 off 50-balls including 7-fours, Wessley Madhevere 20 and Sikandar Raza 18.
Sri Lanka best bowler by Chamika Karunaratne picked up 3-wickets, Jaffrey Vandersay, Nuwan Pradeep both took 2-wickets and Kamindu Mendis took one-wicket.
Sri Lanka chased 300-5 in 48.3 overs with top scorer by Pathum Nissanka struck 75 off 71-balls including 10-fours, Dinesh Chandimal 75.
Charith Asalanka cracked a 71 off 68-balls included 6-fours & 2-sixes with strike rate of 104.41, Kusal Mendis hit 26 off 24-balls including 6-fours and Kamindu Mendis 17.
Zimbabwe best bowler by Richard Ngarava picked up 3-wickets and one for Sikandar Raza - Blessing Muzarabani.
Dinesh Chandimal named Player of the match for his match-winning brilliant 75 off 91-balls including 4-fours & a six.